Volcanoes ee Iceland: sifooyinka iyo qarxis | Shabakadda Saadaasha Hawada
Jarmal Portillo | 07/01/2022 11:28 | Geology
Iceland, dhulka barafka iyo dabka, waa janno dabiici ah. Awooda qaboow ee barafka iyo cimilada arctic-ka ayaa iska hor imanaya kulaylka dhulka. Natiijadu waa adduunyo kala duwanaansho cajiib ah oo qurux badan oo aan la barbar dhigi karin ee muuqaalka muuqaalka ah. Fulkaanooyinka Iceland la'aanteed, waxaas oo dhan waa wax aan macquul ahayn. Awoodda volcano ee jasiiradda Waxay u qeexi kartaa dabeecadda dhulkan si ka fiican foolkaano kasta, abuurista beero doogyo ah oo aan dhammaanayn, bannaanka ciidda madow ee baaxadda leh, iyo buuraha dhaadheer ee dhaadheer iyo jeexjeexyada waaweyn.
Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato volcano-yada Iceland iyo sifooyinka iyo muhiimada ay leeyihiin.
1 Volcanoes ee Iceland
2 Immisa ayaa jira?
3 Inta jeer ee qarax
4 Khatarta foolkaanaha ee Iceland
Xoogaga folkaanaha ee ka hooseeya dusha sare ayaa sidoo kale abuuray qaar ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee dalka, sida ilo kulayl oo dabiici ah iyo geysers qarxinaya. Intaa waxaa dheer, saameynta qaraxyadii hore waxaa lagu arki karaa jiirarka ay sameeyeen godadka lafaha sanka ah iyo tiirarka basalt ee lix geesoodka ah.
Kumanaan kun oo qof ayaa ku soo xoomay Iceland si ay u arkaan foolkaanooyinkeeda iyo mucjisooyinka ay abuureen oo ay sii wadaan abuuritaanka. Inta lagu jiro qarxinta foolkaanaha, waa inaan aad ugu xiisaynaa fursadda arag mid ka mid ah dhacdooyinka ugu yaabka badan uguna yaabka badan dhulka. Iyadoo la tixgelinayo inay muhiim u tahay dabeecadda Iceland iyo dabeecadda warshadaha iyo xitaa dabeecadda waddanka, waxaanu soo ururinnay hagahan awoodda leh ee volcanoes ee Iceland, waxaana rajeyneynaa inay ka jawaabto dhammaan su'aalaha aad naftaada weydiin karto. xoogga foolkaanooyinkan.
Immisa ayaa jira?
Iceland, waxaa jira ilaa 130 foolkaanooyin firfircoon iyo foolkaanooyin hurday. Waxaa jira ilaa 30 nadaam oo foolkaano ah oo ku hoos jira jasiiradda, marka laga reebo Galbeedka Fjords, dalka oo dhan.
Sababta Galbeedka Fjords aysan u yeelan dhaqdhaqaaq volcano waa in ay tahay qaybta ugu da'da weyn ee dhul weynaha Iceland, Waxaa la sameeyay qiyaastii 16 milyan oo sano ka hor ilaa iyo markaas waa laga waayay Range-Badhtamaha Atlantic. Sidaa darteed, Galbeedka Fjords waa aagga kaliya ee dalka u baahan koronto si loo kululeeyo biyaha halkii laga heli lahaa biyaha geothermal.
Dhaqdhaqaaqa foolkaanaha ee Iceland waxaa sabab u ah meesha uu dalku ku yaallo si toos ah cirifka dhexe ee Atlantic ee kala sooca taarikada tectonic ee Waqooyiga Ameerika iyo Eurasian. Iceland waa mid ka mid ah meelaha fara ku tiriska ah ee adduunka laga arki karo tiirarkan oo ka sarreeya heerka badda. Taarikadahan tectonic waa kala duwan yihiin, taas oo ka dhigan in la kala fogaaday. Marka sidaas la sameeyo, magma-ga ku jira gogoldhigga ayaa u muuqan doona mid buuxinaya booska la abuurayo oo u muuqda qaab qarxis foolkaanooyin ah. Dhacdadani waxay ka dhacdaa hareeraha buuraha waxaana lagu arki karaa jasiiradaha kale ee foolkaanaha, sida Azores ama Santa Elena.
Baaxadda Dhexe-Atlantic waxay dhex martaa dhammaan Iceland, dhab ahaantii jasiiradda inteeda badan waxay ku taal qaaradda Ameerika. Waxaa jira meelo badan oo dalkan ah oo laga arki karo tiirarka qayb ahaan, oo ay ku jiraan Jasiiradda Reykjanes iyo gobolka Mývatn, laakiin kan ugu fiican waa Thingvellir. Halkaa, waxaad ku dhex mari kartaa dooxooyinka u dhexeeya taarikada oo aad si cad u arki kartaa darbiyada labada qaaradood ee labada dhinac ee beerta qaranka. Kala duwanaanshaha taarikada awgeed, dooxani wuxuu fidiyaa qiyaastii 2,5 cm sannad kasta.
Inta jeer ee qarax
Qaraxyada Folkaanaha ee Iceland lama saadaalin karo, laakiin si joogto ah ayay u dhacaan. Toban sano ma jirin ilaa horraantii XNUMX-meeyadii iyada oo aan qaraxyo la'aan, in kasta oo ay suurtogal tahay in ay si degdeg ah u dhacaan ama aad u ballaadhan tahay waa ran aan kala sooc lahayn.
Qarxitaankii ugu dambeeyay ee Iceland ayaa ka dhacay Holuhraun ee Highlands 2014. Grímsfjall ayaa sidoo kale diiwaangelisay qarax gaaban 2011, halka Volcano Eyjafjallajökull oo caan ah uu sababay dhibaatooyin halis ah 2010. Sababta ereyga 'la yaqaan' ayaa loo adeegsaday Waxay sabab u tahay tuhunka ah in ay jiraan qaraxyo badan oo foolkaanooyin hoose ah oo ka dhacay meelo kala duwan oo dalka ah kuwaas oo aan jabin xaashida barafka, oo ay ku jiraan Katla ee 2017 iyo Hamelin ee 2011.
Waqtiga xaadirka ah, Khatarta nolosha bini'aadamka ka imanaysa inta lagu guda jiro qarxinta volcano ee Iceland aad ayey u yar tahay. Saldhigyada dhul-gariirka ee ku baahsan dalka ayaa aad ugu wanagsan saadaasha. Haddii foolkaanaha waaweyn sida Katla ama Askja ay muujiyaan calaamadaha dhawaaqa, gelitaanka aagga waa la xaddidi doonaa waxaana si dhow loola socon doonaa aagga.
Thanks to damiirka wanaagsan ee degayaasha ugu horreeya, volcano ugu firfircoon wuxuu ka fog yahay xudunta la deggan yahay. Tusaale ahaan, waxaa jira magaalooyin yar oo ku yaal xeebta koonfureed ee Iceland, sababtoo ah volcano sida Katla iyo Eyjafjallajökull waxay ku yaalaan waqooyiga. Sababtoo ah meelaha ugu sarreeya waxay ku yaalliin barafka ka hooseeya, qarxintiisu waxay sababi doontaa daadad glacial ah, kuwaas oo qaadi kara wax kasta oo jidka loo maro badda.
Middaani waa tan ka dhigaysa inta badan Koonfur u ekaanshaha saxaraha ciidda madow. Dhab ahaantii, waa bannaan bannaan oo ka samaysan kayd glacial ah.
Khatarta foolkaanaha ee Iceland
Lama saadaalin karo daraaddood, daadkan glacial, ee loo yaqaan jökulhlaups, ama Isbaanishka Icelandic, ayaa weli ah mid ka mid ah dhinacyada ugu khatarta badan ee dhaqdhaqaaqa foolkaanaha ee Iceland. Sida kor ku xusan, qarxinta barafka hoostiisa mar walba lama dareemo, sidaas darteed daadadkan qulqulaya waxay ku dhici karaan digniin la'aan.
Dabcan, sayniska ayaa si joogto ah u horumaraya, iyo hadda, Ilaa iyo inta uu jiro shaki yar oo ah in roobdhagaxyaale dhici karo, waad ka bixi kartaa oo aad la socon kartaa aag. Sidaa darteed, sababo muuqda awgood, waa mamnuuc in lagu kaxeeyo waddooyinka mamnuuca ah, xitaa xagaaga ama marka ay u muuqato in aysan jirin khatar.
Inkastoo folkaanaha badankoodu ay ka fog yihiin xarumaha dadku ku badan yahay, had iyo jeer shilalku way dhacaan. Xaaladahan, si kastaba ha ahaatee, tallaabooyinka degdegga ah ee Iceland waxay caddeeyeen inay si weyn waxtar u leeyihiin, sida lagu arkay 1973 qarax ka dhacay Heimaey ee Jasiiradaha Vestman.
Hemai waa jasiiradda kaliya ee ay degan yihiin jasiiradaha Vestman, oo ah jasiirado foolkaanooyin ah. Markii foolkaanaha uu qarxay, 5.200 oo qof ayaa ku noolaa. Saacadihii hore ee 22-kii bishii Janaayo, ayaa waxaa bannaanka magaalada ka bilowday is-rasaasayn xooggan oo ka dhacday bartamaha magaalada, taasoo burburisay waddooyin iyo boqolaal dhismayaal laamiga ah.
In kasta oo ay habeen dambe dhacday oo jiilaalkii dhintay, daadgureynta jasiiradda ayaa si degdeg ah oo hufan loo fuliyay. Markii dadka deegaanka ay si nabad ah u dageen, kooxaha samatabbixinta waxay la shaqeeyeen ciidamada Mareykanka ee ku sugan dalka si loo yareeyo khasaaraha.
Iyaga oo si joogta ah ugu shubaya biyaha badda qulqulka lafaha, kaliya kuma aysan suurtagelin in ay ka fogeeyaan guryo badan, laakiin sidoo kale waxay ka hortageen inay xiraan dekedda, soo afjarida dhaqaalaha jasiiradda weligeed.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto foolkaanaha Iceland iyo sifooyinkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Geology » Volcanoes ee Iceland
Saacadda xiddigiska Prague